Toro-làlana mareva-doko marevaka ravina fanenitra alina China Manufacturer
Description:Hazo fanasam-barotra mavo,Vola vita amin'ny glasy ho an'ny toetry ny alina,Porofo vita tanana vita amin'ny rongony ho an'ny hariva
Home > Products > Didy roa vita tamin&#39;ny rongony > Toro-làlana mareva-doko marevaka ravina fanenitra alina
Ireo kofehy ireo dia rakotra fanafody silane sy silikana, mandritra ny famokarana kofehy vita amin'ny vera, izay hanatsara ny toetry ny porofom-panala sy ny fanesorana ny labozia. Etsy ankilany, ny vanim-potoan'ny vanona fitaratra dia mety maharitra, ary izany dia manatsara ny fitaratra amin'ny fandalovan'ny rivotra amin'ny alina. Ireo kavina ireo dia matetika ampiasaina amin'ny làlana fotsy fotsy na mavo-fanorenana lalambe.
Ny lasopy fitaratra ChiYe dia azo avy amin'ny fari-piadidin'ny firenena na faritra, toy ny EN1423 / 1424, AASHTO M247, BS6088, JIS R3301 ary KS L2521 etc.
ChiYe Glass Bead (Hebei) Co., Ltd, izay natsangana tamin'ny taona 1998, no mpamatsy lehibe sy be mpanolotsaina amin'ny gorodona mirindra amin'ny fiarovana ny arabe.
Ny orinasa dia manana tsipika fananganana labozia 28 ho an'ny famokarana divay vita amin'ny gaza miaraka amin'ny output 100,000MT.
ChiYe dia nanamarina ny rafitra fitantanana kalitao ISO 9001 sy ny rafitra fitantanana ny tontolo iainana ISO 14001.
ChiYe dia manondrana maimaim-poana amin'ny gorodona vita amin'ny gorodona vita amin'ny gorodona vita amin'ny gorodona vita amin'ny gorodona vita amin'ny rongony , Kavina vita amin'ny ravin-damosina, kofehy vita amin'ny biralian S-Brialliance, kofehy manga, fanodinana menamena, paoma lehibe vita amin'ny jiro, divay glasy sy ny sisa.
Ankoatr'izay, ny karazana girondona rehetra dia azo alaina arakaraky ny fari-pahaizan'ireo firenena / faritra sy ny fepetra takian'ny mpanjifa, toy ny EN1423 / 1424, ny AASHTO M247, BS6088, JIS R3301, KS L2521 ary ireo jiro hafa ho an'ny lalana.
Taorian'ny fanavaozana ara-teknolojia maharitra mandrakizay sy ny traikefa an-taonany maro, ny CHIYE Brand dia nomena anarana hoe 'marika malaza' ary koa dia novaina ho "Chinese Recognized Brand Product" avy amin'ny Foibe Fanadinana Engineering an'ny Ministeran'ny Communications of PRC. Nahazo mari-pahaizana CE izahay tamin'ny Sept.2005 sy ny mari-pahaizana KS teto Korea tamin'ny Dec.2006. Tamin'ny 2007 dia tafiditra tao amin'ny ATSSA izahay mba ho mpikambana ao aminy. Ny vokatray dia entina any amin'ny firenena maherin'ny 50, toa an'i Etazonia, Kanada, Grande-Bretagne, Frantsa, Espana, Danemark, Korea, India ary ny hafa.
Hazo fanasam-barotra mavo Vola vita amin'ny glasy ho an'ny toetry ny alina Porofo vita tanana vita amin'ny rongony ho an'ny hariva Hazo fanasambe Koreana Hazo fanasan-damba tsy misy porofo Kitapo fanosotra fanosotra Kitapo manganaham-bato madinika Kilalao fanontam-bolo natao manokana